Taona taorian'ny taona
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Sekoly tsy miankina
Ireo tombony amin'ny taom-pampianarana naharitra taona
Nahoana no mandany taona iray hafa any amin'ny lisea?
Fantatrao fa isan-taona, ny sekoly ambony amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia misafidy ny handany taona iray hafa any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa? Sekoly ambony tsy miankina iray tena marina, ary misoratra amin'ny fandaharam-pianarana fantatra amin'ny anarana hoe graduate taona, na taona PG.
Mpianatra mihoatra ny 150 eran-tany no manolotra fandaharam-pianarana ety. Ny fepetra fampidirana dia miovaova toy ny tanjona amin'ny fandaharam-pampianarana any ivelany. Mety mahatonga hevitra maromaro ny hananana mpianatra hijanona ao amin'ny sekoliny taloha ho an'ny taom-pianarana.
Raha te hanatrika sekoly hafa izy, dia mety hahita ny fandraisana an- tsoratra ho toy ny mampatahotra toy ny mpianatra ho mpianatra voalohany. Amin'ny lafiny iray, ny fanekena ho amin'ny taom-pilalaovana taorinan'ny taom-pianarana any am-piandohana dia ho fombafomba fotsiny. Ny taom-pampianarana nandritra ny taom-pianarana dia tena ilaina tokoa ho an'ny ankizilahy izay maniry ny taona fanampiny vao mihetsiketsika alohan'ny handehanana. Ny taom-pianarana dia manome zatovolahy izay fahatokisana kely fanampiny izay mety tsy ampy amin'ny faran'ny taona faha-12.
Mianara bebe kokoa momba ny PG na ny taom-pianarana fianarana ary nahoana no safidy malaza ho an'ny mpianatra marobe.
Fitomboana manokana / fahamatorana
Ny taom-pianarana nahazo diplaoma dia manome mpianatra bebe kokoa ny mpianatra hanamafy ny fahaiza-manaon'ny academie, handray anjara amin'ny fanatanjahan-tena ary hiomana amin'ny fanandramana fianarana amin'ny kolejy. Ho an'ny mpianatra marobe, manome ihany koa izy ireo fotoana kely kokoa hisian'ny matotra. Tsy ny mpianatra tsirairay no vonona ho amin'ny fiainana mahaleo tena ao amin'ny oniversite, ary tsy miomana amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo.
Ny taom-pianarana nahazo diplaoma nandritra ny sekoly ambaratonga faharoa dia manome fahafahana ny mpianatra hampiasa fomba fiaina mahaleo tena eo amin'ny tontolo iray izay manohana sy mikolokolo. Mety ho vato lehibe hanomana mpianatra ho an'ny oniversite izany.
Hanatsara ny fahafaha-manaiky ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony
Betsaka ny mpianatra misafidy ny hanao taom-pahaizana taorinan'ny taona mba hanatsarana ny mety ho fidirana amin'ny fianarana manokana.
Ny fanekena amin'ny kolejy dia mety hifaninana. Raha misy mpianatra miezaka ny hiditra ao amin'ny oniversite iray, dia mety ho tsara kokoa raha manantena herintaona izy amin'ny fanantenana fa mety ho azo raisina kokoa ny fampiharana azy. Ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina dia manome mpanolo-tsaina za-draharaha mba hanampiana amin'ny dingam-pifandraisana ary hitarika ny mpianatra hanamboatra lalana manokana ho amin'ny fahamendrehana.
Ny fahaiza-manaon'ny atleta tonga lafatra
Ny mpianatra hafa dia maniry ny handray taona iray alohan'ny hialana amin'ny oniversite mba hahatanteraka ny fahaiza-manaony atleta. Avy amin'ny fahafahana hilalao amin'ny ekipa ambony ary ho hitan'ny mpikaroka amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanofanana maivana, ny taona nahazo diplaoma nahazo diplaoma dia afaka manome ny mpianatra ho tsara amin'ny fifaninanana, ary mahazo mpianatra voamarik'ireo scouts izay afaka miditra azy ireo sekoly ambony. Ary, maro amin'ireo atleta elatra no mahazo vatsim-pianarana amin'ny kolejy, ary ny taona nahazo diplaoma nahazo diplaoma dia mety hahatonga ny mpianatra ho kandidà mahafinaritra kokoa.
Sekoly manolotra taona PG
Misy sekoly iray ihany no manolotra programa PG. Izany no Bridgton Academy any Avaratr'i Bridgton, Maine. Ny sekoly hafa rehetra eto amin'ny lisitra etsy ambany dia manome ny taona PG ho karazana faha-13, raha tianao.
Ireto misy sekoly sasantsasany izay manolotra programa PG:
Avon Old Schools Avon, CT
Blair Academy, Blairstown, NJ
Brenau Academy, Gainesville, GA
Bridgton Academy, North Bridgton, ME
Camden Military Academy, Camden, SC
Sekoly Canterbury, New Milford, CT
Chapel Hill-Chauncy Hall, Waltham, MA
Christchurch School, Christchurch, VA
Academies Culver, Culver, IN
Darlington School, Roma, GA
Darrow School, New Lebanon, NY
Ethel Walker School, Simsbury, CT
Florida Air Academy, Melbourne, FL
Akademia Miaramila Fork, Vork Union, VA
Ny School Forman, Litchfield, CT
Ny Gow School, South Wales, NY
Grand River Academy, Austinburg, OH
Sekoly Grier, Tyrone, PA
The Gunnery, Washington, CT
Akademia miaramila Hargrave, Chatham, VA
Hebron Academy, Hebrona, ME
School School, Pottstown, PA
Hoosac School, Hoosick, NY
Ny Hun School any Princeton, Princeton, NJ
Indian Springs School, Indian Springs, AL
Ny sekoly Kiski, Saltsburg, PA
Ny Sekolin'i Leelanau, Glen Arbor, MI
Leysin American School, Leysin, Soisa
Linden Hall School, Lititz, PA
Akademia Miaramila Marine, Harlingen, TX
Miller School, Charlottesville, VA
Missouri Military Academy, Meksika, MO
Montverde Academy, Monteverde, FL
Oldfields School, Glencoe, MD
Orme School, Mayer, AZ
Ny Sekoly Peddie, Hightstown, NJ
Sekoly Perkiomen, Pennsburg, PA
Ny Sekoly Phelps, Malvern, PA
Randolph-Macon Academy, Front Royal, VA
Ny Sekolin'i St. Timothy, Stevenson, MD
Sekoly Atsimo Kent, South Kent, CT
Stoneleigh-Burnham School, Greenfield, MA
Thomas Jefferson School, Saint Louis, MO
Verde Valley School, Sedona, AZ
Vermont Academy, River Saxtons, VT
Hasatch Academy, Mt. Pleasant, UT
Ny Sekoly Webb, Bell Buckle, TN
Wentworth Military Academy, Lexington, MO
West Nottingham Academy, Colora, MD
Western Reserve Academy, Hudson, OH
Sekolin'i Westminster, Simsbury, CT
The School Mountain White, Bethlehem, NH
Wilbraham sy Monson Academy, Wilbraham, MA
Williston Northampton School, Easthampton, MA
Ny Sekolin'i Winchendon, Winchendon, MA
Sekoly ambony ambony Wyoming, Kingston, PA
Taom-pampianarana taom-pianarana: Inona izany?
Understanding the Postgraduate Year
Lahatsoratra navoakan'i Stacy Jagodowski
Fampitahana ny fanabeazana ho an'ny besinimaro
Toby fitorevahana: Fahaizana mahafinaritra any amin'ny sekoly tsy miankina
Strategy miomana amin'ny ISEE sy SSAT
Aiza no nalehan'ny JFK tany an-tsekoly?
Hanafoana ny foto-kevitrao amin'ny adiresy
Torohevitra ho an'ny ray aman-dreny sy mpampianatra mba hisorohana ny famonoan'olona
Fomba 7 Fomba Ivelan'ny Sekoly Alahady hiomana ho amin'ny fianarana
Notsipahina tao amin'ny sekoly tsy miankina: Ahoana amin'izay?
Fomba 3 hividianana ny sekolinao
Ny tombony amin'ny taom-pianarana taom-pianarana
Ahoana no hiomanana amin'ny fitsaboana?
Ny firaisan'ny samy lahy na ny vavy ary ny sekolin'ny lahy sy vavy
Manamarika fa afaka mitondra kodiarana ratsy ianao
Mametraka ny tsetsatsetsa amin'ny Ruby amin'ny Rails
Amin'ny fampiasana ny fepetra mety hitranga hanambarana ny fahombiazan'ny fifindrana
Satin tao amin'ny trano sivy
Te-hanintona aho .... Ho an'ny mpangataka tsy misy dikany
Dingana Lehibe ho amin'ny fidirana ao amin'ny Colleges and Universities
Famotopotorana nataon'i Salem
Fahatakarana ny fotopampianarana Bush
Ahoana ny fomba ampianarana ny lelavola
Ahoana ny fiasan'ny Electric Motors and Generators
Ny Ady Lehibe II: Operation Market-Garden
Anatomy Anatomie: Ny ampahan'ny Caterpillar
Feno Album of Punk Hardcore
Business English - Mametraha Order
Toeram-ponenana biôgrafika: Tanin-tsarobidy
Rock Top Soft Rock na Adult Contemporary '80 taona
Andro voalohan'ny Fivavahana Kristianina Kristiana
Ahoana no Hanadio ny Piano Keys
Ny Prajnaparamita Sutras
Ny mety ho fiavinan'ny teny hoe 'mahitsy' sy 'amim-pahatsorana'
'Notoraham-bava' avy amin'i Laura Hillenbrand Fanontaniana Momba ny Boky Fanadihadiana Momba ny Boky
31 Teny Espaniola Amin'ny English Translations